12 inch audio mobile screen amplifier (included battery) – Rocket Online Shopping
12 inch audio mobile screen amplifier (included battery)
Home ShopComputer Accessories12 inch audio mobile screen amplifier (included battery)
12 inch audio mobile screen amplifier (included battery) quantity
Categories: Computer Accessories, Electronic, Gadget, Mobile Phone Accessories, tv, TVs and home theater.	Tags: Bluetooth, Phone Magnifier, Phone TV Magnifier, Screen Magnifier With Bluetooth Box.
အိမျမှာနရေငျး ဖုနျးထဲက ရုပျရှငျတှေ၊ Youtube ကရုပျရှငျတှကေို ရုပျရှငျရုံထဲမှာ ကွညျ့ရတဲ့ ဖီလငျမြိုးနဲ့ ကွညျ့ခငျြတဲ့ မိတျဆှတေို့အတှကျ ရုပျရော အသံရော ခြဲ့ပေးနိုငျမဲ့ screen amplifier လေးကို rocket မှာရနပေါပွီ…….
ဖုနျးရဲ့ မွငျကှငျးကို 12 လကျမထိခြဲ့ ပေးနိုငျတဲ့ Screen amplifier ပါဝငျပွီး အသံခြဲ့ပေးနိုငျဖို့အတှကျ Speaker နှဈလုံးပါဝငျတဲ့ အတှကျ ဖုနျးထဲက Video တှကေိုကွညျ့တဲ့ အခါမှာ ရုပျရှငျရုံထဲမှာကွညျ့ရသလိုမြိုးခံစားရမှာပါ….
Bluetooth နဲ့ ခြိတျဆကျအသုံးပွုရမှာဖွဈပွီး android နဲ့ Ios နှဈမြိုးလုံးအသုံးပွုနိုငျပွီး
bluetooth version 3.0 ဖွဈတဲ့ အတှကျ ခြိတျဆကျထားခြိနျမှာ အသံထဈတာတှေ မကွညျတာတှအေဖွဈစပေဲ အသံထှကျကောငျးကောငျးနဲ့ ကွညျ့ရှု့နိုငျမှာပါ…..
အားအပွညျ့တဈခါသှငျးထားရငျ နှဈနာရီ ဝနျးကငျြဆကျတိုကျအသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ…………
screen amplifer ကို အသုံးပွုတဲ့ အတှကျ ဖုနျး screen သေးသေးလေးကို အာရုံစူးစိုကျပွီးကွညျ့နစေရာမလိုတော့ပဲ မကျြစိကို သကျသာစပေါတယျ…
battery ပါတဲ့ အတှကျ မိမိကွိုကျနှဈသကျတဲ့ နရောမှာ အသုံးပွုနိုငျသလို ကွိုးတပျထားပွီးလညျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ…..
ဈေးနှုနျး – 21000 kyats (battery ပါပွီး)
အိမ်မှာနေရင်း ဖုန်းထဲက ရုပ်ရှင်တွေ၊ Youtube ကရုပ်ရှင်တွေကို ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ကြည့်ရတဲ့ ဖီလင်မျိုးနဲ့ ကြည့်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် ရုပ်ရော အသံရော ချဲ့ပေးနိုင်မဲ့ screen amplifier လေးကို rocket မှာရနေပါပြီ…….
ဖုန်းရဲ့ မြင်ကွင်းကို 12 လက်မထိချဲ့ ပေးနိုင်တဲ့ Screen amplifier ပါဝင်ပြီး အသံချဲ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Speaker နှစ်လုံးပါဝင်တဲ့ အတွက် ဖုန်းထဲက Video တွေကိုကြည့်တဲ့ အခါမှာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာကြည့်ရသလိုမျိုးခံစားရမှာပါ….
Bluetooth နဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး android နဲ့ Ios နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုနိုင်ပြီး
bluetooth version 3.0 ဖြစ်တဲ့ အတွက် ချိတ်ဆက်ထားချိန်မှာ အသံထစ်တာတွေ မကြည်တာတွေအဖြစ်စေပဲ အသံထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်ရှု့နိုင်မှာပါ…..
အားအပြည့်တစ်ခါသွင်းထားရင် နှစ်နာရီ ဝန်းကျင်ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…………
screen amplifer ကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက် ဖုန်း screen သေးသေးလေးကို အာရုံစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေစရာမလိုတော့ပဲ မျက်စိကို သက်သာစေပါတယ်…
battery ပါတဲ့ အတွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်သလို ကြိုးတပ်ထားပြီးလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…..
ဈေးနှုန်း – 21000 kyats (battery ပါပြီး)
မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးများအားလုံးကို လည်းပို့ဆောင်ခ သက်သာစွာနဲ့ ငွေကြိုလွှဲစရာမလိုပဲစာတိုက်မှ တဆင့် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီနော်..
Customer တွေကို နွေးထွေးမှု့တွေအပြည့်အဝပေးနေတဲ့ Rocket……
Be the first to review “12 inch audio mobile screen amplifier (included battery)” Cancel reply
Mobile Phone Accessories, Tools, Travel
Nut3Key Finder
Mobile Phone Accessories, Tools
Mobile Phone Accessories, Technology
Shake Weight - Promotion Items Ks20,000.00 Ks19,000.00
Portable Zipper - Discount Ks12,000.00 Ks9,000.00
Ionkini car air purifier Ks15,000.00 Ks9,500.00